यस्तो छ चरिकोट काण्डको नालिबेली
असोज १५, २०७३ शनिवार १६:३१:०० प्रकाशित
असोज ७ गते शुक्रबार दिउसो एक बजे बिरामी बालक महादेव रिजाललाई झाडापखाला लागेको भनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरिकोट ल्याइएको थियो । केन्द्रको आकस्मिक कक्षमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु हेल्थ असिस्टेण्ट युवराज केसी र रबिन्द्र खड्काले बिरामी बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा जलबियोजन वा अन्य कुनै जटिलता नदेखिएपछि अवकोलन कक्षमा राखेका थिए ।
बिरामीको घर स्वास्थ्य केन्द्रबाट नजिकै भएकाले उनीहरुकै आग्रहमा ८ गते बिहान फेरी अस्पताल ल्याउने पठाइएको थियो ।
अघिल्लो दिनको कुराकानी अनुसार असोज ८ बिहान बिरामी अस्पताल ल्याइएको थियो । बिहान स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पनि थप जटिलता देखिएको थिएन । स्वास्थ्यकर्मीहरुले बिरामीको दिशा र पिसाब परीक्षण गर्न लगाए ।
रिर्पोट नआँउदासम्म बिरामीलाई केन्द्रको अवलोकन कक्षमा राखिएको थियो ।
सो बिचमा डा. सुदिप जिसी र डा. बिनभ बरालले एक–एक पटक बिरामी हेरेको थिए । बिरामीले राम्रैसँग खाइरहेकाले परीक्षण रिर्पोट आएपछि औषधि दिएर बिरामी पठाउने योजना डाक्टरहरुले बनाएका थिए ।
बिरामीलाई थप समस्या नेदेखिएकाले अबलोकन कक्ष मै राखिएको थियो । सोही दिन अपरान्ह तिर बिरामी बालकले दूध र बिस्कुट खाएका थिए । सो लगत्तै आमाले बालकलाई स्तनपान गराउन सुरु गरिन् । स्तनपान गराई रहँदा आमाले बच्चा निलो भयो भनेपछि अकस्मिक कक्षमा लगे । आकस्मिक कक्षमा बिरामीको एसपिओटु (रगतमा अक्सिजनको मात्रा) ४५–५० प्रतिशत मात्र देखियो । (सामान्यता यो मात्रा ९० भन्दा माथी हुनुपर्छ ।)
त्यसपछि तुरुन्त बिरामीलाई रिसस्सीटेसन (सघन उपचार) सुरु गरिएको थियो । केन्द्रका बरिष्ठ चिकित्सक डा. सुदिप जिसीलाई बोलाई इन्टुबेशन (मुखमा पाइप राखि अक्सिजन दिने) गरी सिपिआर गरिएको थियो ।
(विभिन्न कारणले जब कोही व्यक्ति पूर्ण अचेत हुन्छ, त्यतिबेला उक्त व्यक्तिको मुटुको चाल र श्वासप्रश्वास कृत्रिम तवरबाट प्रत्याभूत गराइने प्रक्रिया नै कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन (सिपिआर) हो ।)
सिपिआरबाट पनि बिरामीको श्वासप्रश्वास रिभाइभल नभएपछि मृत घोषणा गरिएको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु माथी दुब्र्यबहारको सुरुवात
बिरामी बालकको सिपिआर भईरहदा आकस्मिक कक्षमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेण्ट सुरेन्द्र खनाललाई बिरामीका आफन्तले पिटेका थिए ।
बिरामीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्त र स्थानिय ब्यक्तिहरु स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्वाटरमा प्रवेश गरी उनीहरुका सामान फाली फोटो खिच्ने हर्कत गरेका थिए । (त्यसक्रममा स्वास्थ्यकर्मीका धेरै सामान हराएको थियो । जसको जानकारी प्रहरीलाई दिएको छ ।)
सिपिआरलाई बिरामी पक्षले ‘छाती थिचेर मारेको’ भन्ने आरोप लगाउदैं तुच्छ शब्द प्रयोग गरी अस्पतालमै तुच्छ गाली गरेका थिए ।
त्यसपछि बिरामी पक्षले उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘बिरामीको उपचार नै नगरी लापरवाही गरेर हामीले मारेका हौं’ भनि लिखित घोषणा गर्न दबाब दिए । सो भिडका एक व्यक्तिले त्यसो नगरे ‘काटेर हस्पिटल अगाडी गाड्ने’ धम्कि दिएका थिए ।
त्यसपछि पनि स्वास्थ्यकर्मी र उनीहरुको क्वाटरमा निरन्तर आक्रमणको प्रयास भईरहेको थियो । सुरक्षा चुनौती भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई राती अन्यत्रै लगिएको थियो । डा. सुदिप जिसीले भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रात बिताएका थिए ।
९ गते बिहान फेरी केन्द्रमा बिरामी पक्ष र स्थानियको भिडका कारण तनाव बढ्दै गएको थियो । भिडले लिखित माफी माग्न दबाब दिदै गाली गरिरहेका थिए ।
त्यसपछि दुई पक्षका पाँच–पाँच जना बसी छलफल गर्ने भनि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको उपस्थितीमा बैठक बसेको थियो । बैठक स्थलमा भिड प्रवेश गरी लापरवाही गरेको स्विकार गर्न र माफी माग्न दबाब दिएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख (प्रहरी नायव उपरिक्षक) रबिन कार्कीले लिखित माफि माग्न लगाउन नहुने भनी भनेका थिए । तर भिडकै बिचमा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी आले मगरले ‘मैले तपाईहरुलाई तेत्रो महिनादेखि इमरजेन्सिमा २४ घण्टा डाक्टर राख्ने व्यवस्था गर्नुस् भनेको होइन ?’ भन्दै उपचारमा लापरवाही भएको आसय व्यक्त गरी केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ‘तपाईहरुले माफी माग्नुस्, मिलाएर लेख्नुहोला’ भने । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो आसय व्यक्त गरेपछि भिड थप उत्तेजित बनेको थियो । भिड उत्तेजित बन्दै गएपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख र आले मगर त्यहाँबाट हिँडेका थिए ।
त्यसपछि भिडकै निर्देशन अनुसार प्रहरी कर्मचारीले माइन्युट तयार गरेको । त्यतिन्जे स्वास्थ्यकर्मीहरु डरले बोल्ने हिम्मत गर्न छाडी सकेका थिए ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु ज्यान जोगाउन जस्तो सुकै कबुलमा हस्ताक्षर गर्न तयार थिए । उनीहरुसँग अरु बिकल्प थिएन । प्रहरी प्रशासन पनि भिडकै पक्षमा थियो । त्यहाँको दृश्य कुनै ठुलो अपराधिलाई सजाय दिन लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । स्वास्थ्यकर्मीका पक्षमा आवाज निकाल्ने कोही थिए ।
अन्तत अनियन्त्रीत भिडले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अमानविय ढंगले गल्ति कबोल गर्न लगाई हस्ताक्षर गराएको थियो । भिडले जे भन्छ स्वास्थ्यकर्मीहरु त्यही गर्दे गए । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भिडको अगाडी लाइनमा उभिन लगाई गल्ती स्विकार गर्न लगाई हात जोडेर माफी माग्न लगाइएको थियो । जसको भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
किन गरियो अमानविय व्यवहार ?
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरिकोट न्याय हेल्थ नामको संस्थाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलमा सञ्चालन गरेको छ । न्याय हेल्थले सो केन्द्र सञ्चालन गरेपछि बिरामीको संख्या बढ्दै गयो । उपकरण र चिकित्सकको व्यवस्था गरियो । केन्द्र आसपासमा निजी मेडिकल हल सञ्चालन थिए । केन्द्र न्याय हेल्थले सञ्चालन गरेपछि मेडिकल हल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । मेडिकल हल सञ्चालकहरु त्यहाँबाट डाक्टर लखेट्ने बहाना खोजी रहेका थिए । उनीहरुले यो घटनालाई त्यही योजना अनुरुप प्रयोग गरेको बताइन्छ ।
(यो रिर्पोट डा. बद्री रिजाल र डा. बिष्णुरथ गिरीले स्थलगत अध्ययन गरी नेपाल चिकित्सक संघलाई बुझाएको प्रतिवेदनको अंश र एक पिडित स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवालासँग स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो ।)